Xiddiga Kooxda Arsenal ee Granit Xhaka oo laga helay Korona Fayras – Gool FM
Xiddiga Kooxda Arsenal ee Granit Xhaka oo laga helay Korona Fayras
Ahmed Nur September 2, 2021
(London) 02 Sebt 2021. Ciyaaryahanka Kooxda kubadda cagta Arsenal ee Granit Xhaka ayaa laga helay Korona Fayras, xilli uu isku diyaarinayey kulammada heerka caalami ee qarankiisa Switzerland.
Waxaa loo sheegay Xhaka inuu geli doono karaantiil toban maalmood ah, iyadoo xiddigani uu xaaladda ku sii adkeeyey Gunners, waxaana uu seegay kulankii xulkiisu 2-1 kaga adkaaday Greece, sidoo kale waxa uu xulka ka maqnaan doonaa kulammada xiga.
28-sano jirkaan Xhaka ayaa karaantiil ku galay Magaalada Basel, halkaasoo xiddigaha kale ee xulkiisa looga baaray caabuqa saf marka ah ee Korona Fayras, markii xiddigan la mariyey baaritaan loo adeegsaday PCR ayaa lagu ogaaday in Fayraska Korona uu ku jiro korkiisa ciyaaryahan Xhaka.
Xulka Switzerland oo ku jirta Group C, waxay ballansan yihiin Talyaaniga kulankooda xiga, ka hor inta aanay u safrin Belfast oo ay kula soo ciyaari doonaan Northern Ireland.
Xiririka kubadda cagta Switzerland ayaa warkaan ku xaqiijiyey bayaan ay soo saareen oo u dhignaa: “Xhaka waxa laga daaweeyey calaamadaha Fayraska, waxaana la geliyey karantiil isaga iyo qof kale oo ka mid ah shaqaalaha tababarka.”
Waxa uu xilli ciyaareedkan Granit Xhaka ku bilowday xaalad aad u xun, iyadoo aynu ognahay in kulankii ugu dambeeyey ee Kooxdiisa Arsenal uu qaatay Kaarka casaanka ah kulankii ay guuldarrada 5-0 kala kulmeen Man City, xilli haatanna uu haleelay Korona Faryas oo uusan u ciyaari doonin xulkiisa.
Kooxda Arsenal ayaa kal ciyaareedkan waxa uu Korona Fayras kaga dhacay xiddigo dhowr ah oo ay ku jiraan Aubameyang, Alexandre Lacazette, Ben White iyo Willian.
Cristiano Ronaldo oo shaaciyey shaqsigii ka dambeeyey inuu dib ugu soo laabto Man United, kaddib markii uu bixiyey wareysigii ugu horreeyey
Lambarka uu Antoine Griezmann u xiran doono Kooxda Atletico Madrid oo la shaaciyey